I-China MBY (G) Series Echichima iRod Mill ifektri nabaphakeli | Luhle
Isicelo: Umbila wenduku uqanjwe ngemuva kokuba umzimba wokugaya ulayishwe esilindweni uyinduku yensimbi. I-mill mill ngokuvamile isebenzisa uhlobo olunamanzi okugcwala futhi lungasetshenziswa njengomsamo wokuvula wesekethe wokuqala. Kusetshenziswa kabanzi esihlabathini samatshe okufakelwa, izitshalo zokugqoka ezi-ore, imboni yamakhemikhali imboni yokugaya eyisisekelo emkhakheni wamandla wesitshalo.
1. Idivayisi yokondla ehlangene
3. Qeda ikhava
4. Umzimba wesigubhu
5. Ingxenye yokuhambisa
6. Phindisa kabusha
7. Ukusikhipha kokuvula
Imigodi yenduku iqhutshwa yidrayivu ngokusebenzisa i-ancer kanye namagiya amakhulu nezincane ezizungezile, noma ngesivinini esilinganiselana esilinganisa imoto ngokuqondile ngamagiya amakhulu nezincane okushayela kuwo isilinda ukuze ujikeleze. Kufakwa induku yensimbi ephakathi nendawo kulesilinda. I-Mediing yokugaya iphakanyiselwa ekuphakameni okuthile ngaphansi kwesenzo samandla we-centrifugal kanye ne-fiction Force, futhi iwela esimweni sokudonsa noma ukuvuza. Izinto ezihlanganisiwe zingena ngaphakathi kwesilinda ngokuqhubekayo ukusuka ethekwini lokuphaka, futhi zichotshozwe yisikhala sokugaya esishukumisayo, bese umkhiqizo ukhishwa ngaphandle kwesigayo ngamandla okuchichima nokwondla okuqhubekayo, bese kusetshenzelwa inqubo elandelayo.
Lapho ukusebenza kwegreyidi kusebenza, ukuthintana kwengaphezulu yegreyidi yebhola lendabuko kushintshwa kube oxhumana naye. Ngesikhathi senqubo yokugaya, induku ishaya i-ore, okokuqala, izinhlayiya ezihlanganisiwe ziyashaywa, bese izinhlayiya ezincane ziba phansi, ngaleyo ndlela kunciphise ingozi yokuhanjiswa ngokweqile. Lapho induku ijikeleza eceleni kweleyidi, izinhlayiya ezihlanganisiwe zigqitshwe phakathi kwazo, kufana nodondolo, kuvumela izinhlayiya ezinhle ukuthi zidlule phakathi kwezikhala phakathi kwezinduku. Lokhu kusiza nokuchoboza izinhlayiya ezinamafutha futhi kugxiliwe nezinhlayiya ezihlanganayo ekugayeni phakathi. Ngakho-ke, umphumela wokugaya induku umfaniswano owengeziwe, futhi okuchobozekayo kulula kakhulu futhi ukusebenza kahle kokugaya kuphezulu.
Esedlule: I-MQY Yokuchichima Uhlobo lwe-Ball Mill
Olandelayo: FG, FC single spiral classifier / 2FG, 2FC double spiral classifier
I-DC Electromagnetic Stirrer